ဘယ်လ်ဂျီယံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(434 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လောင်းကစား
ဘယ်လ်ဂျီယံလောင်းကစားဝိုင်းပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏အလွန်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ သမိုင်းပညာရှင်ကဒီမှာနှစ်ပေါင်းပြန် 1300 မိုင်မှယနေ့အထိရာဥရောပတိုက်တွင်ကဒ်များကိုကစား၏ပထမဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖော်ပြထားခြင်းတွေ့နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဆယ်ငါးရာစုအတွင်းပထမဆုံးထီကျင်းပခဲ့ကြသည်။
1999 ကတည်းကဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားဝင်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်, ကမေလ7ပေါ်မှာဤနှစျတှငျဖြစ်ပါသည်တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားများ၏ကျင်းပနိုင်ရန်တရားဝင်တဲ့ဥပဒေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါနှစ်များတွင်ပညတ္တိကျမ်းတချို့ပြင်ဆင်ချက်မိတ်ဆက်, ဒါပေမဲ့သူနေဆဲဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ဥပဒေရေးရာအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင် 1999 ၌တည်ခဲ့သည့်ကော်မရှင်, လောင်းကစားလောင်းကစားလှုပ်ရှားမှုများထိန်းညှိ။ ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်လိုင်စင်နှင့်အတူဆကျဆံအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုလောင်းကစားရုံစစ်ဆင်ရေးနှင့်ကစားသမားများ၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့သတင်းအချက်အလက်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လောင်းကစားရုံ 21 နှစ်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရဲသွားရောက်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးတားမြစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောသာမိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏အမှု၌လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဥပဒေနှင့်အညီ, ကုမ္ပဏီတိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှန်ဆောင်မှုများပေးနိုငျကွောငျးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်လည်းမြေပြင်လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ဘို့အဖြေတစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။ လောင်းကစားဘယ်လ်ဂျီယံကော်မရှင်နီးကပ်စွာပညတ်တရား၏အကောင်အထည်ဖော်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှန်မှန်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များ၏အနက်ရောင်စာရင်းကတရားမဝင်နိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အော်ပရေတာဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်ရပညတ်တရား၏ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ပေးသောပမာဏတထောင်ယူရို 100 အထိရောက်ရှိနိုင်ပါ။
ထိပ်တန်း 10 ဘယ်လ်ဂျီယံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးဆက်ပြီး, ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းအတွက်တိုင်းပြည် CasinoToplists Gothic အဘိဓါန်ရဲတိုက်, အရသာ waffles နဲ့ချောကလက်ဖြစ်ပါသည် - ဘယ်လ်ဂျီယံ။ ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ခရီးသွားဧည့်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားသမားတွေအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာကိုအမှုအရာကိုကြည့်ပါစို့။
ဘယ်လ်ဂျီယံ - သမိုင်းနှင့်ပထဝီအနေအထားနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်စကားများ,
မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ 1999 ကနေခွင့်ပြုထားပါသည်;
အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်9ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်;
အသက် 21 နှစ်ပေါင်း။
ဘယ်လ်ဂျီယံ Belgic အမြိုးအနှယျနေထိုင်ခဲ့ကျြမှောကျခတျေ၏ပိုင်နက်ပေါ်မှာငါတို့ခေတ်ရဲ့အစမှာတစ်ဆဲလ်တစ်မူလအစရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအနွယ်၏အမည်ကနေဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်နာမကိုအမှီအစပြု။
ထိုအချိန်တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက် Burgundian အင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ရောမမြို့, စပိန်, နယ်သာလန်နှင့်ပင်ပြင်သစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်များအတွက်အဆုံးအဖြတ်ယခုအချိန်တွင်စက်တင်ဘာလ 23, 1830 ၏ဘယ်လ်ဂျီယံတော်လှန်ရေးခဲ့ - ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်စတီယာရင်ငါနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အနေဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံခုနှစ်တွင်ဘုရင်က Leopold ဗြဲကိုအလွန်ခံစားခဲ့ရဖြစ်လာစဉ်တွင်လွတ်လပ်သောနိုငျငံတျောသညျကွှေးကျွော - မြို့သူမြို့သားအများအပြားလုံးဝနီးပါးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ပေမယ် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. နှင့်မျှမတို့အကောင့်ကဆိုသည်။
အခုတော့ဘယ်လဂျီယံနိုငျငံရေးစနစျဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပါလီမန်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ 21 / 07 / 2013 တွင်, တိုင်းပြည်မင်းကြီးသည်ဖိလိပ္ပုကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ တိုင်းပြည်3ဒေသများ (Flemish, Walloon အဘိဓါန်များနှင့်ဘရပ်ဆဲလ်-Capital ကို), ပြည်နယ်များနှင့်ပိုပြီးခွဲခြားထားတဲ့၏ပထမဦးဆုံး2သို့ခွဲခြားထားတယ်။
အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ဘို့တစ်ဦးကရေနှစ်က 1999 စတင်ခဲ့ပြီး - ကဥပဒေများနှင့်ပြင်ဆင်ချက်ရမညျမွေးစားခဲ့ပြီးတော့ခဲ့တုန်းပဲကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားခန်းမများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းညှိပေးသော။ ဘယ်လ်ဂျီယံ9တည်ဆဲကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်စုစုပေါင်း: 1 မြို့တော်အတွင်းတည်ရှိပြီး - ဘရပ်ဆဲလ်,4နှင့်စသည်တို့ကို Ostend, Namur, Spa, Knokke-Heist အတွက် Flemish နှင့် Walloon အဘိဓါန်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
တိုင်းလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အောက်မှာလည်ပတ်ပြီးအာမခံချက်ရန်ပုံငွေရှိပါတယ် - အကြောင်း, ပါလျှင်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ငွေပေးချေသို့မဟုတ်လိုင်စင်အနိုင်ရသောသိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ 21 နှစ်ပေါင်း၏မှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိကြသူလို့ရပါတယ်သာကလူ (ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်) တကျရောကျပါ။ တိုင်းလောင်းကစားရုံကစားသမားအပေါ်ကဒ်အညွှန်းကိန်းရရှိသွားတဲ့နှင့် 10 နှစ်ပေါင်းဒေတာသိမ်းဆည်းထားရပေမည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားခန်းမများအတွက်တရားစီရင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ, တရားသူကြီး, Notary နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွင့်ပြုမထားပေ။ သင်တန်း၏, မှလွဲ. သူတို့၏တာဝန်များကို၏ဤလူစွမ်းဆောင်ရည်။
ထို့အပြင်လောင်းကစားရုံမှာ input ကိုဆရာဝန်တစ်ဦး, စောင့်ရှောက်သူများ၏လျှောက်လွှာအပျေါမှာပိတ်သိမ်းစေခြင်းငှါ, လောင်းကစားမှီခိုအတည်ပြုသင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ပြဌာန်းချက်နဲ့ရငျးနှီးတဲ့ဆွေမျိုးကစားရန်လိုသည်။ ရုံကစားသမားသင့်ရဲ့ access ကိုပိတ်ဆို့ဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် - ကရုံလောင်းကစားရုံအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
ဘရပ်ဆဲလ် - - တစ်ဦးလောင်းကစားရုံနိုင်ငံ၏မြို့တော် «ဂရန်းကာစီနိုဘရပ်ဆဲလ် Viage " ဒါဟာဖဲချပ်ဝေ WPT အဆင့်ကို ( .. ။ ကမ္ဘာကြီး Poker Tour) tournaments ကျင်းပ $ 60, ငွေသားဂိမ်းမန့်သတ်ချက် hold'em သို့မဟုတ် Omaha ကနေဝယ်-ins အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်နေ့စဉ်ကျင်းပကြသည်နှင့်အတူဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲ, တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့'S ထိုင် & GO အိမ်ရှင်အဖြစ် ကာစီနို slot နှစ်ခု၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း - ။ တောင်းဆိုဖောက်သည်များအတွက် 375 ယူရို, Blackjack, ကစားတဲ့, Baccarat မှ 1 ရာခိုင်နှုန်းကနေနှုန်းထားများနှင့်အတူ 1 စက်တွေ, mahjong နှင့်ငွေဘီးဆေးပြင်းလိပ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားဝီစကီတစ်ဦးကိုအထူး menu ကိုအတူ VIP- ခန်းမရှိသေး၏။
ပြတိုက် ဘီယာ (Belgische Brouwers) ။ နေရပ်လိပ်စာ: ရန်း-Place, 10 ။ ဤတွင်, ဘီယာဘီယာ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအဆိုပါ 18th ရာစုအပြပွဲကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်နှင့်လည်းမာလ်တီမီဒီယာနည်းပညာကို အသုံးပြု. ခေတ်မီစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အကြောင်းအများကြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြတိုက်ကုန်ကျစရိတ်€5မှဝင်ပေါက်။
ပြတိုက် "Autoworld » (Autoworld) ။ နေရပ်လိပ်စာ: Parc du Cinquantenaire, 11 ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအမိုးအောက်, ပြတိုက် 400 ကားတစ်စီးမော်ဒယ်များထက်ပိုပါရှိသည်: စပျစ်သီး, အားကစား, မော်တော်ကားကြယ်ဂေဟစနစ်မော်တော်ယာဉ်များ, စည်ပင်သာယာမော်တော်ယာဉ်များနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလက်မှတ် - € 9, (6 ထံမှ 12 နှစ်) ကလေးများ - € 5, အောက်မှာ - အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး '' Atomium '' ၏သင်္ကေတ။ နေရပ်လိပ်စာ: ရိပ်သာလမ်း de l'Atomium, 1020 ။ အဆိုပါ Heizel မက်ထရိုဘူတာရုံမှလာမယ့်။ ဤသည်မှာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးသည်လည်းကျယ်ဝန်း 160 ဘီလီယံအထိကာလ၌တစ်ဦးသံအက်တမ်တစ်ဦးကြည်လင်ရာဇမတ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ 102 မီတာအမြင့်, နှင့်အလေးချိန်အကြောင်းကို 2,400 တန်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအလွန်အထင်ကြီးဆောက်လုပ်ရေး!
"Mini ကို-ဥရောပ" ပန်းခြံ။ တည်နေရာ: အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး "Atomium" အနီး။ အဆိုပါပန်းခြံ 1 မှ 25 တစ်စကေးအပေါ်ဖျော်ဖြေဥရောပ၌အလှဆုံးသောအရပ်တို့ကိုပါရှိသည်။ စုစုပေါင်း 80 မြို့ကြီးများနှင့် 350 အရာဝတ္ထုအဲဒီမှာပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ Eiffel မျှော်စင်နှင့်ပိန်ကြုံသောမျှော်စင်နှင့်ဘာသာစကား Venetian လမ်းများ, Big Ben က, သင်တန်း, အကျော်ကြားဆုံး။
ရုပ်ပြပြတိုက်။ လိပ်စာ : Belian ရုပ်ပြမြှောင် Center က 20, rue des Sables (Zandstraat) ။ ရုပ်ပြပရိတ်သတ်တွေ 25,000 ယနေ့ချိန်အထိအများဆုံး "မုတ်ဆိတ်မွေး" မှအလုပ်လုပ်တယ်ထက်ပိုမိုပါဝင်သောပြတိုက်ပြပွဲ, ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရုပ်ပြစာအုပ်စာရေးဆရာများ၏အများဆုံးနေထိုင်သည်။
ဒါဟာထက်ပို 10 လူဦးရေသန်းမှနေရာဖြစ်သည် - နိုင်ငံခြားသားတွေအများကြီး;
တိုင်းပြည်ဘီယာ 800 အမျိုးအစားများထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်များနှင့်တစ်နှစ်လောက်ဒီနိုင်ငံအသီးအသီးတို့သည်နေသောသူ 150 လီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသောက်။ ရုံဒီမှာနှစ်စဉ်ချောကလက်၏ 220,000 တန်ချိန်ထုတ်လုပ် - က 22 ကီလိုလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လဂျီယံသခင် "praline" ၏မျိုးနှင့်အတူတက်လာ;
ဘီယာအသေးစားပုလင်း - လီတာ, နှင့်ပိုပြီး 0.25 - 0.33 လီတာနှင့် 0.5 ၏ထင်ရသော standard volume ကို၏ပုလင်းခဲရှာဖွေနိုင်ရန်
ဖလန်းဒါးစ်, ဒတျချြနှင့်ပွငျသစျထဲတွင် Wallonia အတွက်အများအားဖြင့်ဟောပြောလော့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Fleming ကအရမ်းအေးမြ valontsam ပါ၏
ဘယ်လ်ဂျီယံအလွန်ယဉ်ကျေးဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးအချိန်ဇယားပေါ်မှာအသက်ရှင် - ပဲသင်အောင်မြင်ဖွယ်မရှိပေပါတီပြီးနောက်ခရီးစဉ်ကိုတက်ဖြည့်;
ဘယ်လ်ဂျီယံ - စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခု;
အိမ်ထောင်စုများ၏ 93% တစ်အိမ်မှာဆိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိသည် ဖြစ်. ,
ပွဲတော်များနှင့်ပွဲတော်များစဉ်အတွင်း "Manneken Pis" ၏ကျော်ကြားပုံဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ကြသည်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အကြောင်းကို 600 ၏လုပ်နေကြတယ်,
တနင်္ဂနွေတွင်, ဒီမှာအဘယ်သူမျှမလုပ်မလုပ်ပါဘူး - ပင်ဆေးဆိုင်;
ဒီနေရာတွင်က saxophone, ရေနံဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ကိတ်စီးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 ဘယ်လ်ဂျီယံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း